Ahoana ny fomba hananganana sy hampiasana mailaka VIP amin'ny iPhone | Avy amin'ny mac aho
El Paositra VIP fomba mora azo antoka hahazoana antoka fa tsy diso ny mailaka avy amin'ny fifandraisana izay heverinao ho "Olona Tena manandanja." Ao amin'ny rindranasan'ny mailaka tompon-tany dia azonao atao ny manangana boaty mailaka handefasana ny mailaka rehetra avy amin'ny fifandraisana izay nomarihinao teo aloha hoe "Olona Tena manandanja".
Ireo fifandraisana ireo dia hiseho miaraka amin'ny kintana volondavenona eo akaikin'ny anarany ao amin'ny lisitra fandefasan-kafatra azy rehetra, ary raha toa ianao ka nampandeha ny iCloud, io olona io ihany no ho VIP amin'ny fitaovanao rehetra.
Ho antsika izay mahazo mailaka am-polony am-polony isan'andro, ity fiasa ity dia tena ilaina tokoa satria mamela anao hahita haingana ireo mailaka toa anao manandanja indrindra. Noho izany, ny fampiasana ity boaty mailaka ity dia fomba tsara hijanonana ho voalamina ary izany no antony anehoanay anao anio ny fomba fampiasana azy.
Para amboary ny boaty mailaka VIP, voalohany indrindra sokafy ny mailaka mailaka ao amin'ny iPhone na iPad. Raha eo amin'ny iray amin'ireo lisitry ny mailakao ianao, kitiho ny Mailboxes eo amin'ny zoro ambony havia. Avy amin'ny efijery lehibe, miaraka amin'ireo boaty mailaka eo an-tampony, dia ho hitanao ny boaty boaty ary eo ambaniny, ny boaty mailaka "tena manan-danja" miaraka amina kintana manga eo akaikiny. Kitiho ny «i» izay ho hitanao eo akaikiny. Raha te hanampy fifandraisana vaovao dia kitiho ny Add VIP ary fidio ny fifandraisana.
Mba hanesorana ny fifandraisana amin'ny lisitra VIP dia alefaso fotsiny ny rantsan-tananao amin'ny anarany miankavia ary tsindrio Hamafa.
Azonao atao koa ny manampy ny fifandraisana na ny mailaka VIP manokatra ny iray amin'ireo mailaka izay nampitondrain'ity fifandraisana ity anao ary manindry ny anarany. Avy eo dia hisokatra ny karatra an'io fifandraisana io ary mila tsindrio fotsiny ianao hoe aiza ilay hoe «Add to VIP».
Tadidio fa manampy olona ao amin'ny lisitry ny VIP tsy mamafa ny mailaka ao anaty boaty izy io, fa mampiseho azy ireo ihany koa ao anaty boaty manokana.
Aza adino izany ao amin'ny faritra misy anay Tutorials manana eo am-pelatananao karazana toro-hevitra sy tetika isan-karazany ho an'ny fitaovana Apple, fitaovana sy serivisinao rehetra.
Etsy ankilany, mbola tsy nihaino ny fizarana Apple Talkings ve ianao? Podcast an'i Applelised.
SOURCE | Fiainana iPhone
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hananganana sy hampiasana mailaka VIP amin'ny iPhone-nao
Apple Stores dia miomana ny hifindra amin'ny harona plastika nentim-paharazana ho modely kitapo taratasy vaovao